cajalad waraabka faleebo - Shiinaha Tianjin Chunyuan Longrun
Cajalad waraabka faleebo The guri biibiile faleebo emitter hoose, la galiyay emitter guriga galay biibiile khafiif ah inay ka sameeyaan sidii cajalad isku dhafan. wada emitter sharooto ah, rakibidda fudud. Iyadoo suuqa kala filter, emitter leeyahay shaandhayso ability.Adopt socodka midii pass awood u leeyihiin gunnada cadaadis, kala dheereynta emitter wuxuu noqon karaa looga baahan yahay qofka macaamilka ah. Features: (1) .Waxaa jira filter nooca uu furmo suuqa ku dripper iyo awoodda la dagaalanka burcad-urka waa xoog badan yahay; (2) channel socodka .Oo waa qasan iyo biyaha ...
Min.Order Tirada: 10000m
Supply Kartida: 24,000,000m
The guri biibiile faleebo emitter hoose, la galiyay emitter guriga galay biibiile khafiif ah inay ka sameeyaan sidii cajalad isku dhafan. wada emitter sharooto ah, rakibidda fudud.
Iyadoo suuqa kala filter, emitter leeyahay shaandhayso ability.Adopt socodka midii pass awood u leeyihiin gunnada cadaadis, kala dheereynta emitter wuxuu noqon karaa looga baahan yahay qofka macaamilka ah.
(2) channel socodka .Oo waa qasan iyo socodka biyaha waa joogto ah;
(3) .Oo square outlet biyaha waa weyn oo la xoojiyo kartida anti-urka ah;
(4) meel fog .Oo dooran karo in badan oo kala duwan;
(5) dripper .Oo la geliyo ka hor inta aan laga soo qaaday ka warshad, kaas oo badbaadiyay kharashka shaqada iyo in la yareeyo maalgelinta;
(6) dhererka xaareysa on dhulka .Oo gaari karaan in ka badan 80;
(7) awoodda .anti-nabaad waa xoog badan yahay.
Goynta hoos u dhigayo qiimaha wax soo saarka.
Hoos dhaawac by cayayaanka.
Kordhaya wax soo saarka.
16mm tayada biibiile waraabka faleebo waa wanaagsan yahay ugu fudud u dareerin waxyaabaha waraabka. design dhismeedka macquul ah, si fiican iska caabin ah awooda meel saxmad ah, qiimaha hoose. Waxaa loo isticmaali karaa on waqti ama wax ka badan, waa wax soo saarka dhaqaalaha waraabka badbaadinayo biyaha.
taariikhda farsamo Main of cajalad waraabka faleebo
oo dhumucdiisuna waxay: 0.15mm 0.18mm 0.2mm 0.4mm 0.6mm 0.8mm
Qulquli heerka: 1.0L / H 1.38L / H 3.0L 2.0L / H 2.7L / H / H
Masaafada Dripper: 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm sida looga baahan yahay
cadaadiska shaqada: 0.5-1.5 bar
dhererka Roll: 500m / duudduuban 1000m / duudduuban 2000m / duudduuban Sida loo baahan yahay
1. mugga Water-go'in waa xitaa iyo consistence.
2. Farm biibiile waraabka faleebo waxaa la soo saaray iyadoo technology ugu horumarsan.
3. tuubooyinka Farm ilaalin karaa qaab-dhismeedka ciidda, hortago adkayn ciidda, wax soo saarka sare, marka lagu daro waxay leedahay saameyn saarida cusbo deegaanka
4. waraabka faleebo The badbaadin karo khayraadka biyaha, kharashka shaqada, kharashka bacrimin qalabka waraabinta dhaqanka marka la barbar dhigo.
5. Waa iftiinka, iyo fududahay in la diyaarin iyo si ay u ururiyaan oo duurka ku yahay.
1. baarka Free la heli karo;
2. OEM waxaa laga heli karaa,
3. design nidaamka Waraabka free waxaa laga heli karaa.
4. 24 saacadood online iyadoo heerarka jawaab sare;
5. Good ka dib-sale raadraaca iyo adeega;
6. kooxda design xirfadeed Strong,
7. Si yaryar waa lagu soo dhoweynayaa.
Previous: waraabka faleebo beeraha
Next: cajalad waraabka faleebo nidaamka waraabinta micro
Tape faleebo 0.15mm
0.6mm 0.8mm 1.0mm dhumucdiisuna faleebo Waraabka Tape
16mm PE Waraabka Tape
Beeraha faleebo Tape
Beeraha waraabiyaa Tape
Double Line faleebo Tape
faleebo Waraabka faleebo Diamete cajalad r 16
Faleebo Tape Waraabka
Tape faleebo Waraabka Iyadoo Flat Drippers
faleebo tuuboyinka Tape
faleebo Factory Tape
faleebo Line Production Tape
Flat emitter faleebo Tape
Waraabka faleebo Tape
Waraabka faleebo Tape 16 mm
saaraha faleebo Tape
Tape faleebo Water
beeraha line nidaamka waraabka faleebo waraabiyo
Nidaamka waraabka beeraha isticmaalaya irriga faleebo ...
beeraha cajalad waraabka faleebo
design cusub cajalad waraabka faleebo
Shiinaha cajalad faleebo warshad